Android လုံခြုံရေး - သင့်ရဲ့လက်ကိုင်ဖုန်း (သို့) တက်ဘလက်တွေကိုဒီအချက်တွေနဲ့ကာကွယ်ပါ Androidsis (စာမျက်နှာ ၃)
App Store ရှိ malware များကိုအဆုံးသတ်ရန်အတွက် Google Play ဖြင့်ဖန်တီးထားသောဤမဟာမိတ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
သင်မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကိုသင်အမှန်တကယ်ဟုတ်မှန်သည်မမှန်ဆုံးဖြတ်ရန် Facebook မှမိတ်ဆက်ပေးမည့်အစီအမံအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
သင်၏ Facebook အကောင့် logins များကိုမည်သို့ကြည့်မည်နည်း
ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရပဲတစ်စုံတစ်ယောက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Facebook အကောင့်ကိုတစ်ချိန်ချိန်တွင် ၀ င်ရောက်ခြင်းရှိ၊
Instagram ပေါ်မှသင်၏ဒေတာများကိုမည်သည့်ကုမ္ပဏီများက ၀ င်ရောက်ကြည့်ရှုသည်ကိုကြည့်ရန်
သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုမည်သည့်ကုမ္ပဏီများက ၀ င်ရောက်ခွင့်ပြုသည်ကိုသင်ထိန်းချုပ်နိုင်သော Instagram ပေါ်ရှိအင်္ဂါရပ်အသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
တစ်စုံတစ်ယောက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Instagram အကောင့်ကိုတစ်ချိန်ချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ ၀ င်ရောက်ခဲ့ခြင်းရှိ၊ မရှိသိရှိနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့လိုက်နာရမည့်အဆင့်များကိုရှာဖွေပါ။
Instagram လုံခြုံရေးဖောက်ဖျက်မှု! ထိတွေ့အသုံးပြုသူများ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်
အသုံးပြုသူအချက်အလက်များကိုဖုန်းနံပါတ်သို့မဟုတ်အီးမေးလ်ဖြင့်ထိတွေ့စေသည့် Instagram ပေါ်ရှိလုံခြုံရေးဖောက်ဖျက်မှုအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
သင်၏ Android အတွက်အကောင်းဆုံး Dialer တစ်ခုဖြစ်သည်။ BRUTAL !!
ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းနှင့်ဖုန်းနံပါတ်တို့၏လုံခြုံမှုနှင့်သီးသန့်တည်ရှိမှုအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သောလုပ်ဆောင်ချက်များပါ ၀ င်သည့် Spectacular Dialer ။
ဂူဂဲလ်မှထိုအကြံဥာဏ်နှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုရှာဖွေပါ၊ ၎င်းတို့၏အရည်အသွေးနှင့်လုံခြုံရေးကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက်ဂူဂယ်လ်ပလေးရှိအပလီကေးရှင်းများတွင်အမှားအယွင်းများကိုရှာရန်ပိုက်ဆံပေးမည့်
သင်၏စကားဝှက်ကိုပေါက်ကြားလျှင် Google Chrome ကသင့်ကိုအကြောင်းကြားလိမ့်မည်
အတွင်းပိုင်းတွင် malware နှင့် adware ပါသော FaceApp မိတ္တူအချို့ကြောင့်တွေ့ရှိရသောအန္တရာယ်များအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
လုံခြုံရေးပြissuesနာများကိုရှောင်ရှားရန်သင်၏ Android အကောင့်မှသင်၏ Google အကောင့်အား ၀ င်ရောက်မှုကိုမည်သို့ဖယ်ရှားရမည့်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
သင်၏ Android ဖုန်းတွင်ရှိသည့်အပလီကေးရှင်းများသည်လုံခြုံမှုရှိမရှိသိရှိရန်အကောင်းဆုံးကိရိယာတစ်ခုကိုရှာဖွေပြီးထိုကဲ့သို့သောပြproblemsနာများကိုရှောင်ရှားပါ။
Google Play Store မှ Android ကိုအသုံးပြုသူများကိုအနှောင့်အယှက်ပေးသောကြောင့်ဖယ်ရှားထားသောဤအပလီကေးရှင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
ဂူဂဲလ် ၀ န်ထမ်းများသည် Google Assistant နှင့် Google Home တို့မှစုဆောင်းထားသောအသံများကိုနားထောင်ကြသည်
ဂူဂဲလ် ၀ န်ထမ်းများသည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များနားထောင်နိုင်သည့်ဂူဂဲလ်မူလစာမျက်နှာနှင့်ဂူဂဲလ်လက်ထောက်အသံများအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
ဂူဂဲလ်ပလေးတွင်အက်ပလီကေးရှင်းပေါင်း ၂,၀၀၀ ကျော်ရှိပြီးယနေ့အချိန်တွင်အက်ပလီကေးရှင်း ၂,၀၀၀ ကျော်ရှိနေပြီး၎င်းတို့အားလုံးဖယ်ရှားထားခြင်းမရှိကြောင်းဤလေ့လာမှုနှင့် ပါတ်သက်၍ ပိုမိုလေ့လာပါ။
WhatsApp ကိုစကားဝှက်တစ်ခုသို့မဟုတ်လက်ဗွေသော့ခတ်ခြင်းဖြင့်သင်မည်သို့ပိတ်ဆို့နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောပါမည်။ သင်၏စကားပြောဆိုမှုများကိုကာကွယ်ရန်အကောင်းဆုံးအက်ပ်များနှင့်နည်းလမ်းများ။
အချို့သောကုမ္ပဏီများသည် 5G ၏ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုလုပ်ဆောင်ရန်အတွက်ဥရောပ၌ရေးဆွဲမည့်နာမည်ပျက်စာရင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
ANDROID ALERT !!: BeiTaAd, ဂူဂဲလ်ပလေးတွင်အက်ပလီကေးရှင်းပေါင်း ၂၃၈ ခုတွင်ဝှက်ထားသောကြော်ငြာကြော်ငြာ
ဂူဂဲလ်ပလေးတွင်အသုံးချပရိုဂရမ် ၂၃၈ ခုတွင်ပါဝင်ပြီးအကြိမ်ပေါင်း ၄၄၀ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲယူသော BeiTaAd adware အကြောင်းလေ့လာပါ။
WhatsApp ကသင့်အဆက်အသွယ်များ၏ပရိုဖိုင်းဓါတ်ပုံများကိုသိမ်းရန်သင့်အားခွင့်မပြုတော့ပါ။ တကယ်လား
Android ဖုန်းရှိသင်၏ SIM ကဒ်မှ PIN နံပါတ်ကိုပယ်ဖျက်ရန်အဆင့်များကိုရှာဖွေပါ၊ သို့နှင့်သင်သည်ဖုန်းဝင်သောအခါ၎င်းကိုထည့်ရန်မလိုအပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်၏ WiFi ကိုတိုက်ခိုက်မှုများသို့မဟုတ်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုများမှကာကွယ်သည့်အခါကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သည့်အမျိုးမျိုးသောအကြံဥာဏ်များကိုရှာဖွေပါ။
Google I / O 2019 တွင်တရား ၀ င်တင်သွင်းပြီးမကြာခင် Android သို့ privacy သို့မကြာခင်ရောက်ရှိလာမည့်အပြောင်းအလဲအားလုံးကိုရှာဖွေပါ။
ကြော်ငြာလိမ်လည်မှုအတွက် Google Play မှအက်ပလီကေးရှင်း ၆ ခုကိုဖယ်ရှားခဲ့သည်
ကြော်ငြာလိမ်လည်မှုအတွက်ဖယ်ရှားထားသောဂူဂဲလ်ပလေးမှဖယ်ရှားထားသောဤအက်ပလီကေးရှင်း ၆ ခုအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
ဂူးဂဲလ်မှတရားဝင်ထုတ်ပြန်ပြီးဖြစ်သော ၂၀၁၈ Android လုံခြုံရေးအစီရင်ခံစာအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့အားဤအချက်အလက်များကိုကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုသည်။
Firefox Lockbox: Mozilla ၏ password manager သည် Android သို့လာသည်
Android တွင်တရားဝင်ဖွင့်လှစ်ထားသော Mozilla ၏စကားဝှက်စီမံခန့်ခွဲမှုအသစ် Firefox Lockbox စတင်ခြင်းအကြောင်းကိုပိုမိုလေ့လာပါ။
ဈေးကွက်တွင်အကျော်ကြားဆုံးဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေး၏စစ်ဆေးတွေ့ရှိမှုနှုန်းကိုအကဲဖြတ်သည့် Android တွင်ဤလေ့လာမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုလေ့လာပါ။
Android operating system မှရရှိသော FIDO အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်အရမကြာမီတွင်သင်၏သော့အားလုံးကိုမမှတ်ရတော့ပါ။
Android Play အသုံးပြုသူတိုင်းကသူတို့ရဲ့အကောင့်နဲ့စက်ပစ္စည်းများကိုလုံခြုံအောင်ထိန်းသိမ်းရန်သိထားသင့်သည့် Google Playh ၏အဓိကအချက်အလက်များကိုပြသသည်။
သင်၏ Android မိုဘိုင်းတွင် pop-up သို့မဟုတ် pop-up ကြော်ငြာများပေးပို့သည့်အက်ပ်များကိုမည်သို့ရှာဖွေမည်နည်း
ငါ့ဖုန်းဘယ်မှာလဲ။ သင်တစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီးသင်ကိုယ်တိုင်ထိုမေးခွန်းကိုမေးခဲ့ဖူးပါက၊ ကျွန်ုပ်အားအကြံပြုမည့်လျှောက်လွှာသည်အလွန်အထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မည်။
Adiantum: အနိမ့်ဆုံး Android အတွက် encryption အသစ်
ဈေးကွက်တွင်တရားဝင်ဖွင့်လှစ်ထားပြီးသော Android အတွက်နိမ့်ကျသောဒီဇိုင်းအတွက် Google ၏စာဝှက်စနစ်အသစ် Adiantum အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ဖုန်းကိုပိုမိုလုံခြုံအောင်ပြုလုပ်နည်း
ရိုးရှင်းတဲ့နည်းနဲ့ပိုပြီးလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ Android ဖုန်းတစ်လုံးရရှိဖို့ကူညီပေးမယ့်ဂူဂဲလ်ရဲ့အကြံပြုချက်ငါးခုကိုရှာဖွေပါ။
Alexa နှင့်လိုက်ဖက်သော Ring's New Stick Up Cam လုံခြုံရေးကင်မရာ
Ring Stick Up Cam ကင်မရာသည် Amazon မှထုတ်လုပ်သည့်မော်ဒယ်သစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားရရှိစေရန်နှင့်အတွင်းပိုင်းနှင့်အပြင်ပိုင်းနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။
Photo Stealing Camera Apps - ဂူဂဲလ်ပလေးရှိ Malware အသစ်
တရားဝင်ဖယ်ရှားပြီးဖြစ်သောကင်မရာအပလီကေးရှင်းများတွင်ဂူးဂဲလ်ပလေးတွင်တွေ့ရှိရသောဤ malware အသစ်အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
သင်၏ Android ဖုန်းတွင် WhatsApp လိမ်လည်မှု (သို့) ဗိုင်းရပ်စ်များကိုအလွယ်တကူဖော်ထုတ်နိုင်သည်ကိုပိုမိုရှာဖွေပါ။
phishing အီးမေးလ်ကိုစိတ်ချရသောအီးမေးလ်နှင့်မည်သို့ခွဲခြားရမည်ကိုသင်သိပါသလား။ Google နှင့်ရှာဖွေပါ
သင်၏အီးမေးလ်သို့ရောက်သော phishing အီးမေးလ်များကိုသင်အလွယ်တကူခွဲခြားသိနိုင်သည့်ဂူဂဲလ်ဖန်တီးထားသောဤဂိမ်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
သင်၏ Android အပလီကေးရှင်းများကိုလျှို့ဝှက်နံပါတ်ဖြင့်ကာကွယ်နိုင်ပုံကိုလေ့လာပါ AppLock၊ ၎င်းအတွက်အက်ပလီကေးရှင်းမှကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ဂူဂဲလ်ပလေးမှဖယ်ထုတ်လိုက်သောထိုအပလီကေးရှင်း ၈၅ ခုအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက၎င်းတို့သည်ကြော်ငြာများသာပြသရန်ရည်ရွယ်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Play Protect ဖြင့် Android တွင် malware ကိုမည်သို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရမည်နည်း
သင်၏ Google ဖုန်းတွင်တပ်ဆင်ထားသည့်အက်ပလီကေးရှင်းများအားဂူဂဲလ်ပလေးကာကွယ်ခြင်းကို သုံး၍ malware ရှိမရှိမည်သို့ရှာဖွေမည်ကိုလေ့လာပါ။
သင်၏ Android ဖုန်းမှဗိုင်းရပ်စ်ဖယ်ရှားခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖုန်းမှဗိုင်းရပ်စ်တစ်မျိုးကိုဖယ်ရှားရန် Android တွင်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သောနည်းလမ်းအားလုံးကိုရှာဖွေပါ။ ရရှိနိုင်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများ။
ဒီဇင်ဘာလတွင် Samsung Galaxy S9 + အတွက်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ patch ကိုရရှိခဲ့သည်
ဒီဇင်ဘာလလုံခြုံရေး Galaxy S9 + အတွက် update ကိုယခုအခါ download ရယူနိုင်သည်။
တရုတ်အက်ပလီကေးရှင်းများ၏ ၉၀% သည်အသုံးပြုသူအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းသည်
ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ဖုန်းတွင်လက်ဖြင့်အရန်ကူးရန်မည်သို့ပြုလုပ်နိုင်သည်ကို Google Drive တွင်မည်သို့သိမ်းဆည်းနိုင်သည်ကိုလေ့လာပါ။
Play Store မှဂိမ်းများကိုဖယ်ရှားပစ်လိုက်သည်ဟုဟန်ဆောင်။ အန္တရာယ်ရှိသည့်အက်ပလီကေးရှင်းများ
Play Store သို့ဝင်ရောက်ပြီးစုစုပေါင်း download ပေါင်း ၅၀၀၀၀၀ ကျော်ရှိသည့်ဒီအန္တရာယ်ရှိတဲ့အက်ပလီကေးရှင်းများအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
သင်၏ Android ဖုန်းတွင်အန္တရာယ်ရှိသောအက်ပလီကေးရှင်းများရှိမရှိကိုမည်သို့ရှာဖွေမည်နည်း
သင်၏ Android ဖုန်းတွင်အန္တရာယ်ရှိသောအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုရှိမရှိနှင့်ထိုကိစ္စတွင်လိုက်နာရမည့်အဆင့်များရှိမရှိသင်မည်သို့ရှာဖွေနိုင်သည်ကိုရှာဖွေပါ။
ဒီနေ့ခေတ်မှာ Android လုံခြုံရေးအခြေအနေကိုဂူးဂဲလ်ထုတ်ဝေတဲ့ဒီလုံခြုံရေးအစီရင်ခံစာအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Google က Android voice unlocking ကိုမလုံခြုံမှုအဖြစ်ဖယ်ရှားပစ်လိုက်သည်
Pixel3တွင် voice unlocking ကိုအစားထိုးသော function အသစ်တစ်ခုကိုတွေ့ရသည်။ မကြာခင်မှာပဲဂူးဂဲလ်ဗားရှင်းအသစ်ကိုရောက်လာပါလိမ့်မယ်။
Facebook အကောင့်သန်း ၃၀ သည် hack ခြင်းခံရသည်
Facebook hack ခံရသည့်အကောင့်ပေါင်းသန်း ၃၀ အသုံးများဆုံးလူမှုကွန်ယက်ရှိလုံခြုံရေးပြproblemနာအကြောင်းကိုပိုမိုရှာဖွေပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ဖုန်းကိုမည်သည့်အချိန်တွင် format လုပ်ရမည်နည်း။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Android ဖုန်းကို format လုပ်ဖို့ကောင်းတဲ့အခါ။ သင်၏ Android ဖုန်းကို format လုပ်ရန်အကြံပြုလိုသည့်အခြေအနေများကိုရှာဖွေပါ။
Android filter ပေါ်မှမည်သည့် application မ်ားကိုမည်သို့သိရမည်နည်း
အန်းဒရွိုက်အပလီကေးရှင်းဒေတာများယိုစိမ့်လျှင်မည်သို့ထိန်းချုပ်ရမည်။ သင်၏ဖုန်းနှင့်အသုံးချပရိုဂရမ်များ၏ privacy ကိုတိုးတက်စေရန်ဤအကြံပြုချက်များကိုရှာဖွေပါ။
VPN ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း၊ ၎င်းသည်မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။ VPN ဆိုသည်မှာအဘယ်သို့သောအကြောင်းနှင့်၎င်းအတွက်အကောင်းဆုံးကိုအပြင် Android တွင်ကျွန်ုပ်တို့သုံးနိုင်သည့်အရာများအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Android application တွေကဘာကိုခွင့်ပြုပေးပါသလဲ။
Android ပေါ်မှမည်သည့်ခွင့်ပြုချက်များကိုတောင်းခံသနည်း။ Android တွင်အသုံးအများဆုံးခွင့်ပြုချက်များနှင့်၎င်းတို့အားမည်သို့စီမံရမည်ကိုရှာဖွေပါ။
နောက်ဆုံးတွင် Tor Browser ကို Play Store တွင်စတင်ခဲ့သည်
Tor Browser သည် Android အတွက်တရားဝင်ရောက်ရှိသည်။ Play Store တွင်ရှိပြီးသား Android ဖုန်းများအတွက်ဒီဘရောက်ဇာစတင်ခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Android 9.0 Pie သို့မွမ်းမံထားသည့်မည်သည့်ဖုန်းကိုမဆိုခြေရာခံရန်ခွင့်ပြုထားသောအားနည်းချက်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်
အားနည်းချက်သည် Android Pie သို့မွမ်းမံထားသည့်ဖုန်းများကိုခြေရာခံရန်ခွင့်ပြုသည်။ Android တွင်တွေ့ရှိရသောလုံခြုံရေးအားနည်းချက်ကိုပိုမိုလေ့လာပါ။
Android အတွက်အကောင်းဆုံးလုံခြုံရေးအက်ပလီကေးရှင်းငါးခု Play Store မှဤလုံခြုံမှုဆိုင်ရာအသုံးချပရိုဂရမ်များကိုရှာဖွေပါ။
Nokia သည် Bootloader ကို၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ update တွင်ပိတ်ထားသည်
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်က Nokia စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည့်နောက်ဆုံးပေါ်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ update ကို အသုံးပြု၍ ၎င်းတို့၏ terminals များကိုအပြည့်အဝရယူနိုင်ရန်အတွက် Custom ROM များကိုတပ်ဆင်ရန်ရည်ရွယ်ထားသောသုံးစွဲသူများသည်၎င်းတို့၏ bootloader ကိုသော့ဖွင့်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပိတ်ပင်ထားသည်။ Terminal များ၊ သင်ယခင်ကကြေငြာခြင်းမပြုဘဲသင်ပြုလုပ်ခဲ့သောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သည်။
Android One ဖုန်းများတွင်လစဉ်လုံခြုံရေး update များရှိသည်။ ဤနောက်ဆုံးသတင်းများအကြိမ်ရေနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုရှာဖွေပါ။
ဂူဂဲလ်နှင့် WhatsApp အကြားသဘောတူညီချက် - မိတ္တူကူးခြင်းသည်ဂူဂဲလ်ဒရိုက်တွင်အသုံးပြုသောနေရာအဖြစ်မှတ်ယူမည်မဟုတ်ပါ
WhatsApp နှင့် Google တို့အကြားသဘောတူညီမှုအသစ်ကြောင့်သင်၏ WhatsApp အကောင့်၏အရန်ကူးမိတ္တူများသည်သင်၏ Google Drive အကောင့်တွင်ရေတွက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
Google Chrome 68 သည် HTTPS မပါပဲစာမျက်နှာများကိုလုံခြုံမှုမရှိကြောင်းပြသသည်။ Android browser update အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
ဆိပ်ကမ်းအချို့သည်စျေးကွက်၌ခဏတာရောက်ရှိနေသော်လည်း Samsung အပါအ ၀ င်အချို့သောထုတ်လုပ်သူများကမူ Samsung ကုမ္ပဏီမှ Samsung Galaxy Note5အတွက်လုံခြုံရေးအဆင့်မြှင့်မှုကိုစတင်မိတ်ဆက်လိုက်ပြီဖြစ်သောကိုရီးယားကုမ္ပဏီအကြောင်းကိုလုံးဝမေ့သွားသည်တော့မဟုတ်ပေ။
လစဉ်ကဲ့သို့ပင်ကိုးရီးယားကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏ဆာဗာများကိုစတင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီးကုမ္ပဏီ၏ကိုယ်စားပြုသောစမတ်ဖုန်းများကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်အတွက် Samsung Galaxy S2018 နှင့် S8 + အတွက်ဇူလိုင်လ ၂၀၁၈ နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သည့်လုံခြုံရေး update ကိုရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဇူလိုင်လတွင် Galaxy J6 အတွက်လုံခြုံရေးအခြေအနေကိုစပိန်နိုင်ငံတွင်ရရှိနိုင်ပြီဖြစ်သည်
Galaxy J6 အတွက်ပထမဆုံးလုံခြုံရေး update ကိုယခုစပိန်နှင့်အီတလီတို့တွင် download ပြုလုပ်ပြီး၎င်းသည်ပထမဆုံးရရှိသည့်နိုင်ငံများဖြစ်သည်။
WhatsApp ကသင့်ကိုသံသယဖြစ်ဖွယ်လင့်များအကြောင်းသတိပေးလိမ့်မည်။ Anti-Fake News App သို့လာမည့်အင်္ဂါရပ်အသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Ping Pong King ၏မကောင်းဆိုးဝါးနှိမ်နင်းသောဂိမ်းများ - ပုံမှန်ထိန်းသိမ်းထားသည့်ပုံမှန်ဂိမ်း
သငျသညျစွဲလမ်းဂိမ်းနှင့်အတူအနည်းငယ်ပျော်စရာမိနစ်ဖြုန်းချင်လျှင်, ဒီ Ping Pong က King ဖြစ်ပါတယ်။ အစာရှောင်ခြင်းနှင့် devilish ဂိမ်းများကို။
LaLiga app သည်ဖုန်း၏မိုက်ခရိုဖုန်းကို သုံး၍ ဘားများပေါ်တွင်သူလျှိုလုပ်သည်
LaLiga app သည်ဖုန်း၏မိုက်ခရိုဖုန်းကိုသုံးရန်ခွင့်ပြုချက်တောင်းသည်။ အက်ပလီကေးရှင်းမှတောင်းဆိုထားသောအငြင်းပွားဖွယ်ခွင့်ပြုချက်အသစ်များအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
နောက်ဆုံးပေါ် Galaxy S9 နှင့် S9 + ၏လုံခြုံရေးဆိုင်ရာနောက်ဆုံးသတင်းကဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်ခွင့်ပြုသည်
နောက်ဆုံး Galaxy S9 နှင့် Galaxy S9 + အတွက်နောက်ဆုံးပေါ်လုံခြုံရေး update ကကျွန်ုပ်တို့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်ခွင့်ပြုသည့်လုပ်ဆောင်မှုကိုသက်ဝင်စေသည်။
Samsung မှ Galaxy Note 8 အတွက်မေလလုံခြုံရေး Update ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ Samsung သည်မေလ ၂၀၁၈ တွင် Galaxy Note 2018 အတွက်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအသစ်ပြောင်းခြင်းကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းနှင့်အဆိုးနှစ်မျိုးလုံးအတွက်အသေးစိတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်။ အမှန်တရားထက်မျက်နှာ၏သော့ဖွင့်ခြင်းအပလီကေးရှင်းသည်အသံထက် ပိုမို၍ ထင်သည်။
Google ကwithစတြေးလျတွင် Android နှင့်ပြaနာတစ်ခုစုံစမ်းခဲ့သည်
Android မှအသုံးပြုသူအချက်အလက်ရောင်းရန်အတွက်သြစတြေးလျတွင် Google ကစုံစမ်းခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီ၏စီးပွားရေးပုံစံအတွက်ကုမ္ပဏီရင်ဆိုင်နေရသည့်သုတေသနအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ Android နှင့်သင်၏ထည့်သွင်းထားသောအသုံးချပရိုဂရမ်များ၏ privacy ကိုထိန်းချုပ်ရန်ကောင်းမွန်သောလျှောက်လွှာကိုရှာနေပြီးရိုးရှင်းသော App Lock နှင့်မကျေနပ်လျှင်၊ ဤ app ကိုသင်နှစ်သက်မည်သေချာသည်။
WhatsApp သည်အသုံးပြုသူများအား၎င်းတို့အသက် ၁၆ နှစ်ဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုရန်တွန်းအားပေးသည်
WhatsApp သည်အသုံးပြုသူများအား ၄ င်းတို့သည်အနည်းဆုံး ၁၆ နှစ်အရွယ်ဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုရန်တောင်းဆိုသည်။ အသစ်သောဥရောပစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီလိုက်နာရန်လျှောက်လွှာထိန်းချုပ်မှုအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
သင်၏ Gmail အကောင့်ကိုကာကွယ်ရန်သိကောင်းစရာများ
Facebook က privacy settings နဲ့ in-app layout ကို update လုပ်တယ်
Facebook က privacy settings အသစ်များကိုဥရောပစံအသစ်သို့အဆင့်မြှင့်သည်။ privacy စည်းမျဉ်းအသစ်တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာခြင်းကြောင့် application အတွင်းလူမှုကွန်ယက်၏ပြောင်းလဲမှုများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
ကျွန်ုပ်သည်သင့်အား Android အတွက်အခမဲ့လျှောက်လွှာတစ်ခုကိုပြသထားသောဗီဒီယိုအကြံပေးချက်သည်သင့်အားမယုံနိုင်လောက်အောင် Android သော့ခတ်မှုပုံစံအသစ်တစ်ခုကိုခွင့်ပြုလိမ့်မည်၊ သော့ဖွင့်ပုံစံ၊ ပင်နံပါတ်၊ စကားဝှက်သို့မဟုတ်လက်ဗွေရာများထက်များစွာလုံခြုံသည်။
အရွယ်မရောက်သေးသူများထံမှဒေတာများကိုမျှဝေပေးသော Android application ၃၃၀၀ ကျော်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်
အရွယ်မရောက်သေးသူများအားထောက်လှမ်းနေသည့် Android application ၃၃၀၀ ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အရွယ်မရောက်သေးသူများထံမှဒေတာများကိုရယူရန်နှင့်မျှဝေရန်ရည်ရွယ်ထားသောဤလျှောက်လွှာများအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Google က Android လုံခြုံရေး patch နဲ့ထုတ်လုပ်သူတွေကိုခွဲခြားချင်တယ်
ဂူးဂဲလ်ကလုံခြုံရေးပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများကိုပြောင်းလဲမည် Android ဖုန်းများအတွက်လုံခြုံရေးပြင်ဆင်မှုများကိုပြောင်းလဲလိုသောကုမ္ပဏီ၏အစီအစဉ်များအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Android လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လက်တွေ့ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာမှာ apk များကိုဒေါင်းလုပ်ချပြီးတပ်ဆင်ရန်အတွက် Google Play Store သို့အခြားရွေးချယ်စရာစတိုးဆိုင်များကိုဘယ်လိုလုံခြုံစွာသုံးရမည်ကိုရှင်းပြထားတယ်။
MyFitnessPal app ကို hacked လုပ်ထားပါတယ်
MyFitnessPal ကို hacked လုပ်ထားပြီး password ပြောင်းရန်အကြံပြုသည်။ application ကိုသက်ရောက်သော hack အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။ ထို့ကြောင့်၊ သုံးစွဲသူများသည် ၄ ​​င်းတို့၏စကားဝှက်ကိုလျှောက်လွှာတွင်အမြန်ဆုံးပြောင်းရန်အကြံပြုသည်။
Chrome 65 သည်၎င်း၏ incognito mode ကိုပြောင်းလဲသည်
Google Chrome 65 သည် incognito mode သို့ပြောင်းလဲမှုများကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ ဂူဂဲလ်ဘရောင်ဇာတွင် incognito စနစ်ပြောင်းလဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုရှာဖွေပါ။
Play Store သည်အန္တရာယ်ရှိသောအက်ပလီကေးရှင်းပေါင်း ၃၉ သန်းကိုဖယ်ရှားခဲ့သည်
Play Store မှအန္တရာယ်ရှိသောအက်ပလီကေးရှင်း ၃၉ သန်းကိုဖယ်ရှားခဲ့သည်။ ဂူဂဲလ်၏လုံခြုံမှုအစီရင်ခံစာတွင်ဖော်ပြထားသောကိန်းဂဏန်းများအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
အများဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဘက်ထရီပြproblemsနာများကို generate သော applications များ သင့်ဖုန်းတွင်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဘက်ထရီပြproblemsနာများအများဆုံးဖြစ်ပေါ်စေသော application များဖြင့်ဤစာရင်းကိုရှာဖွေပါ။ Avast လေ့လာမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Pixel2နှင့် Nexus တို့တွင်မတ်လလုံခြုံရေး patch ရှိသည်။ အချို့သောတိုးတက်မှုများနှင့်အတူလုံခြုံရေး patch အသစ်ရောက်ရှိလာခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုအတွက်အကောင်းဆုံး Android application များ
သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုအတွက်အကောင်းဆုံး Android application များ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များကိုကောင်းစွာဂရုစိုက်ရန်အတွက်ဤရွေးချယ်မှုများအကြောင်းကိုပိုမိုရှာဖွေပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Wi-Fi ကွန်ယက်၏လုံခြုံရေးကိုစစ်ဆေးနိုင်မည့်ကိရိယာများနှင့် ၄ င်းတို့၏အားနည်းချက်များ၊ အရာများ၏အင်တာနက်ကိုပင်လျှင်စစ်ဆေးနိုင်လိမ့်မည်။
Android အမှတ်တံဆိပ်နှစ်ခုသာကောင်းမွန်သောလုံခြုံရေးပံ့ပိုးမှုပေးသည်။ Android ရှိပြtheနာများကိုမီးမောင်းထိုးပြသည့်ဤလုံခြုံရေးအစီရင်ခံစာအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
လုံခြုံရေးကုမ္ပဏီ Sophos မှအစီရင်ခံစာတစ်ခုကိုထုတ်ဝေခဲ့ပြီး၎င်းတွင် Play စတိုး၌ရရှိနိုင်သည့် application ၁၉ ခုအား developer များအနေဖြင့်၎င်းတို့၏ခွင့်ပြုချက်မရပဲ cryptocurrencies သတ္တုတွင်းကိုခွင့်ပြုထားကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
သန်းနှင့်ချီသော Android ဖုန်းများသည်ကျွန်ုပ်၏ cryptocurrencies ကူးစက်ခံရသည်
သန်းနှင့်ချီသော Android ဖုန်းများသည်၎င်းကိုမသိဘဲ cryptocurrencies ကိုအသုံးပြုသည်။ သင်ကိုယ်တိုင်မည်သို့ကာကွယ်ရမည်ကိုသင်သိလိုပါသလား။
တွေ့ရှိရသောအားနည်းချက်များအတွက် Google ကဒေါ်လာ ၂.၉ သန်းပေးခဲ့သည်
တွေ့ရှိရသည့်အားနည်းချက်များအတွက်ဂူဂဲလ်ကဒေါ်လာ ၂.၉ သန်းပေးခဲ့သည်။ အမှားအယွင်းများရှာဖွေခြင်းအတွက်ကုမ္ပဏီကပြုလုပ်သောငွေပေးချေမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိပါ။
Bitdefender: Android အတွက် Ultimate Antivirus
Bitdefender Mobile Security - Android အတွက်အကောင်းဆုံး antivirus ။ Android အတွက်ဒီဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးကိရိယာအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ရှာတွေ့နိုင်သည့်အကောင်းဆုံး
Android ပေါ်ရှိ privacy ကိုတိုးတက်စေရန်လှည့်ကွက်
Android ပေါ်ရှိ privacy ကိုတိုးတက်စေရန်ရိုးရှင်းသောလှည့်ကွက် ၆ ခု သင်၏ Android ကိရိယာတွင်သင်၏အချက်အလက်များ၏လုံခြုံမှုကိုတိုးတက်စေမည့်နည်းလမ်းများကိုရှာဖွေပါ။
AI ကို အသုံးပြု၍ ဂူဂဲလ်ပလေးတွင်အန္တရာယ်ရှိသောအက်ပလီကေးရှင်းပေါင်း ၇၀၀၀၀၀ ကျော်ကိုဖယ်ရှားခဲ့သည်
700.000 ခုနှစ်တွင်ဂူးဂဲလ်ပလေးမှ 2017 အန္တရာယ်ရှိတဲ့အက်ပလီကေးရှင်းများကိုဖယ်ရှားခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကဂူးဂဲလ်ပြုလုပ်ခဲ့သောလုံခြုံရေးအလုပ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖုန်းတွင်အန္တရာယ်ရှိသောအက်ပလီကေးရှင်းများထည့်သွင်းခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်။ အန္တရာယ်ရှိသည့် application များတပ်ဆင်ခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်အတွက်ဤအကြံပြုချက်များကိုရှာဖွေပါ။
ROOT မပါပဲ SMS နှင့် Call Call ကိုဘယ်လို Backup လုပ်မလည်း
လက်တွေ့နှင့်သက်ဆိုင်သောဗွီဒီယိုသင်ခန်းစာကိုကျွန်ုပ်တို့တို့သို့သိုမဟုတ်သိုမဟုတ်သိုမဟုတ်သိုမဟုတ်သော terminal သို့မဟုတ်ပြန်လည်သိုလှောင်ရန်မလိုပဲ SMS နှင့်ခေါ်ဆိုမှုများကို backup ပြုလုပ်ရန်သင်ကြားပေးသည်။
ဒီဇင်ဘာလအတွက် S6 အစွန်း + လုံခြုံရေး update ကိုယခုရရှိနိုင်ပါသည်
ဒီဇင်ဘာလလနှင့်ကိုက်ညီသည့် Galaxy S6 edge + ၏လုံခြုံရေးအဆင့်မြှင့်တင်မှုသည်အသုံးပြုသူများအားလုံးစတင်အသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံတွင်ထပ်မံစတင်ခဲ့သည်။
Samsung Galaxy A7 အတွက်လုံခြုံရေးအဆင့်မြှင့်တင်မှု (2017)
Galaxy A7 2017 အကွာအဝေး၏ဆိပ်ကမ်းများတွင် Samsung မှနောက်ဆုံးပေါ်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာနောက်ဆုံးသတင်းကိုရရှိထားပြီးဖြစ်သည်။
Galaxy A3 2016 နှင့် A3 2017 တို့သည်လုံခြုံရေးအသစ်တစ်ခုကိုရရှိသည်
Galaxy A3 2016 နှင့် A3 2017 တို့သည်အသစ်ပြောင်းလဲခြင်းအသစ်တစ်ခုကိုရရှိထားပြီး၎င်းသည်မော်ဒယ်နှစ်မျိုးလုံး၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးသေးငယ်သော bugs များကိုလည်းပြုပြင်ပေးသည်။
Loapi malware သည်သင်၏ကိရိယာကို သုံး၍ cryptocurrencies ကိုမြှုပ်နှံသည်။ ဒီနေ့ခေတ် Android ဖုန်းများနှင့်သက်ဆိုင်သောဒီ malware အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
လျှို့ဝှက်နံပါတ်များကိုခိုးယူသော Play Store မှဂူဂဲလ်သည် application ၈၅ ခုကိုဖယ်ရှားခဲ့သည်။ စကားဝှက်ခိုးယူသည့်အက်ပ်များအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
သင့်ကလေး၏မိုဘိုင်းတွင်မိဘထိန်းချုပ်မှုကိုအသုံးပြုရန်အကြောင်းပြချက် (၃) ချက်။ မိဘထိန်းချုပ်မှုကိုအသုံးပြုရန်အဘယ်ကြောင့်ဤအကြောင်းရင်းများကိုရှာဖွေပါ။
နောက်ဆုံးသတင်းများကိုစစ်ဆေးရန်ခလုတ်သည်အချို့သော Android များတွင်ပြတ်သည်။ Android ဖုန်းများတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သောဤ bug အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
ဂူဂဲလ်ပလေးသည်အသုံးပြုသူအချက်အလက်များ၏ privacy ကိုတိုးတက်စေလိမ့်မည်
Google Play ကမလိုအပ်သော application ခွင့်ပြုချက်များအကြောင်းသတိပေးလိမ့်မည်။ စတိုးဆိုင်ရှိလုံခြုံရေးအစီအမံအသစ်အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားကိုအတည်ပြုဖို့ Facebook ကသင့်ကို selfie တောင်းပါလိမ့်မယ်။ လူမှုကွန်ယက်မကြာမီမိတ်ဆက်တော့မည့်အစီအမံအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Android app လေးခုအနက်သုံးခုသည်အသုံးပြုသူများကိုခြေရာခံသည်။ ဤအပလီကေးရှင်းများနှင့်၎င်းတို့မည်သို့သတင်းအချက်အလက်ရရှိသည်ကိုပိုမိုရှာဖွေပါ။
Google က WhatsApp ကိုထိခိုက်သော spyware ကိုရှာဖွေသည်
Tizi: WhatsApp နှင့်အခြားအက်ပလီကေးရှင်းများရှိသီးသန့်အချက်အလက်များကိုရယူသောစပိုင်ဝဲ။ အသုံးချပရိုဂရမ်များစွာအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသော spyware အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ
OnePlus ဖုန်းများမှအချက်အလက်များကိုခြောက်နာရီတိုင်းခိုးယူသည်။ ဒီလေးနက်သောလုံခြုံရေးနှင့်သီးသန့်တည်ရှိမှုချိုးဖောက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါက
BankBot - လက်နှိပ်ဓာတ်မီး app များရှိဘဏ်အချက်အလက်များကိုခိုးယူသော Trojan
BankBot - လက်နှိပ်ဓာတ်မီး app များရှိဘဏ်လုပ်ငန်းအချက်အလက်များကိုခိုးယူရန် Trojan သည်။ ဒီလုံခြုံရေးပြissueနာအကြောင်းကိုပိုမိုရှာဖွေပါ။
သင်၏ Android ဖုန်းကသင့်တည်နေရာကိုပိတ်ထားရင်တောင်သိသည်
သင်၏ Android ဖုန်းကသင့်တည်နေရာကိုပိတ်ထားရင်တောင်သိသည်။ ဂူဂဲလ်ကိုအတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခဲ့သည့်ဝန်ခံချက်အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
၁၀ စက္ကန့်တိုင်းမှာ Android သည် malware ဖြင့်တိုက်ခိုက်သည်
၁၀ စက္ကန့်တိုင်းမှာ Android ကိရိယာကို malware တစ်ခုကတိုက်ခိုက်သည်။ operating system တွင်လုံခြုံရေးပြသနာများကိုပြသသောဤအချက်အလက်နှင့် ပါတ်သက်၍ ပိုမိုရှာဖွေပါ။
OnePlus သည် root ရရှိနိုင်သောသင်၏ဖုန်းများပေါ်တွင် app တစ်ခုကိုကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသည်
OnePlus သည် root ရရှိနိုင်သောသင်၏ဖုန်းများပေါ်တွင် app တစ်ခုကိုကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသည်။ Qualcomm မှတီထွင်ထားသော application အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Google Chrome 64 သည်အခြားစာမျက်နှာများသို့ညွှန်ကြားသောကြော်ငြာများကိုပိတ်လိမ့်မည်
Google Chrome 64 သည်အခြားစာမျက်နှာများသို့ညွှန်ကြားသောကြော်ငြာများကိုပိတ်လိမ့်မည်။ Chrome 64 တွင်အသစ်အဆန်းများကိုရှာဖွေပါ။
Samsung Galaxy J5 (2017) အတွက် BlueBorn anti-malware လုံခြုံရေး update ကိုယခုသင်ကူးယူနိုင်သည်။
သင့်ရဲ့ Android ကိုသူလျှိုကင်မရာတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲနည်း
သင်၏ Android ဖုန်းအဟောင်းအား၎င်းကိုအိမ်၌ဖြစ်စေ၊ အလုပ်တွင်ဖြစ်စေ၎င်းကိုထိရောက်သောထောက်လှမ်းရေးကင်မရာတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုခြင်းအားမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုလေ့လာပါ
WhatsApp ၏အားနည်းချက်သည်လူတစ် ဦး အားအက်ပလီကေးရှင်းရှိအခြားသူတစ် ဦး ၏လှုပ်ရှားမှုကိုစူးစမ်းရန်ခွင့်ပြုသည်
WhatsApp မှအားနည်းချက်တစ်ခုသည်လူနှစ် ဦး သည်မက်ဆေ့ခ်ျများဖလှယ်နေသည့်အချိန် (သို့) အသုံးပြုသူတစ် ဦး အိပ်ရာဝင်ချိန်ကိုသိရန်ဖြစ်နိုင်သည်
Natalya Kaspersky သည်သုံးစွဲသူများကိုအက်ပလီကေးရှင်းများမှဒေတာစုဆောင်းခြင်းမှကာကွယ်ရန် Taiga မိုဘိုင်းဖုန်းကိုတီထွင်နေသည်။
ထုတ်ကုန်သုံးမျိုးစ တင်၍ အိမ်လုံခြုံရေးအတွက်အသိုက်သည်အလောင်းအစားဖြစ်သည်
Nest ကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏ပထမဆုံးအိမ်လုံခြုံရေးစနစ်ဖြစ်သော Nest Secure ကိုလွယ်ကူစွာအသုံး ၀ င်ပြီးအခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများဖြင့်တွဲဖက်ထားသည်
Check Point ၏အဆိုအရ DU Antivirus Security app ကိုသတိပြုပါက ဦး ဆောင်လုံခြုံရေးကုမ္ပဏီကအချက်အလက်သည်ခိုးယူခြင်းမရှိဘဲခိုးယူသွားလိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်
ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာမှာ Blueborne ကမင်းရဲ့မိုဘိုင်းကိုဘယ်လိုထိခိုက်သလဲဆိုတာကိုငါဘယ်လိုရှင်းပြရမလဲ၊ ဘယ်လိုရှောင်ရှားရမလဲဆိုတာကိုလက်တွေ့ရှင်းပြပေးတယ်။
BlueBorne သည် Bluetooth မှအားနည်းချက်တစ်ခုမှတဆင့်ထုတ်ကုန်သန်း ၈၄၀၀ ကျော်ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသော Android malware တစ်ခုဖြစ်သည်
Samsung KNOX ကိုအဆင့်မြှင့်တင်
စီးပွားရေးဝန်းကျင်အတွက်မူလရည်ရွယ်ထားသော Samsung ၏လုံခြုံရေးပလက်ဖောင်းဖြစ်သော Samsung KNOX ကိုအသစ်ပြုပြင်ပြီးအသစ်သောအသုံးအဆောင်များနှင့်သတင်းများပို့ဆောင်ပေးသည်။
OnePlus 4.1.7 နှင့် 3T အတွက်အောက်စီဂျင် OS3update သည် bug နှင့်လုံခြုံရေးပြင်ဆင်မှုများပါဝင်သည်
OnePLus 4.7.1 နှင့် OnePlus 3T အတွက်ဖြန့်ချိသော Oxygen OS3update အသစ်သည် bug fixes နှင့်လုံခြုံရေးတိုးတက်မှုများသာပါ ၀ င်သည်။
Purism Librem5သည်အကြွင်းမဲ့လုံခြုံရေးပရိတ်သတ်များအတွက်အကောင်းဆုံးမိုဘိုင်းဖြစ်သည်
Purism Librem5သည် Debian GNU / Linux နှင့်အမြင့်ဆုံး encryption အခြေခံသော operating system ပါ ၀ င်သော Purism ကုမ္ပဏီ၏နောက်ထပ်လုံခြုံသောစမတ်ဖုန်းဖြစ်သည်။
သင်တရားမ ၀ င်စင်တာများတွင်ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်အတွက်ယူဆောင်လာပါကသင်၏မိုဘိုင်းဖုန်းကိုဟက်ကာများကမည်သို့ထောက်လှမ်းနိုင်မည်နည်း
Qualcomm သည် Android Mobile ကင်မရာများအတွက်နည်းပညာအသစ်များကိုကြေငြာခဲ့သည်
Qualcomm Spectra သည်ကင်မရာနှစ်လုံးတပ်ဆင်ထားသောစနစ်ဖြစ်သည်။ နက်ရှိုင်းသောနယ်မြေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်ပြီး Android ဖုန်းများပေါ်တွင်လှုပ်ရှားမှုများကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီသိရှိနိုင်သည်။
သုံးစွဲသူများဘေးကင်းလုံခြုံမှုအတွက် Samsung သည်၎င်း၏လစဉ်ဘက်ထရီပမာဏ၏ ၃% ကိုဖျက်ပစ်သည်
အသုံးပြုသူများ၏လုံခြုံမှုကိုသေချာစေရန်နှင့် Galaxy Note7case ပြီးနောက် Samsung သည်၎င်း၏ဘက်ထရီစာရင်း၏ ၃% ကိုလတိုင်းဖျက်ဆီးပစ်သည်
Android တွင်ဗိုင်းရပ်စ်များကိုရိုးရှင်းသောအဆင့်အနည်းငယ်ဖြင့်မည်သို့ဖယ်ရှားရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြသပြီးထိုနည်းအားဖြင့် malicious application ကိုရှာပြီးဖျက်ပစ်နိုင်သည်။ သင်ကူးစက်ခံနေရပါသလား။ ရှာတွေ့သည်!
Android M တွင် screen overlay ပြသနာများကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတာကိုပြပြီးဆက်တင်ကို disable လုပ်ရမှာကသင့်ကိုပြတယ်။
Google သည်စက်သင်ယူမှု algorithm ကိုတီထွင်ခဲ့ပြီး application တစ်ခုကလိုအပ်သည်ထက်ပိုမိုခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သည်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်
သင်၏ Mac သို့မဟုတ် PC မိတ္တူပွားများကို Google Drive တွင်ယခုသင်လုပ်နိုင်သည်
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ဂူးဂဲလ်သည်သင်၏ဂူဂဲလ်ဒရိုက်နှင့်အတူသင်၏ Mac သို့မဟုတ် PC တွင်သင်အသုံးပြုနိုင်သည့်အရံနှင့်ထပ်တူပြုခြင်းအသစ်တစ်ခုကိုစတင်ခဲ့သည်
Android Alert! သင်၏ Android ကိုခိုးယူသော malware အသစ်ကိုသူလျှိုလုပ်ပါ။
Android Alert! ဒေါင်းလုပ်လုပ်စဉ်တတိယပါတီအက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်သတိထားပါ၊ သင်၏ဒေတာများနှင့်ထိတွေ့နိုင်ခြေရှိသည်။
Android 7.1 Nougat ရဲ့ "Panic Mode" ကိုသင်သိပါသလား။
နောက်ဆုံးပေါ် Android 7.1 Nougar update တွင်သုံးစွဲသူများကိုသူတို့မှထွက်ခွာရန်တားဆီးသည့်လိမ်လည်လှည့်စားသည့်အက်ပလီကေးရှင်းများကိုတိုက်ဖျက်ရန်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်မှုစနစ်ပါဝင်သည်
အသစ်ဇူလိုင်လလုံခြုံရေး patch ကိုယခု Pixel နှင့် Nexus အတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်
ယခုဇူလိုင်လလုံခြုံရေး patch အသစ်ကိုတပ်ဆင်ရန်စနစ်ပုံများနှင့် OTAs ကိုယခုရရှိနိုင်ပါသည်။ ဘာကို install လုပ်ဖို့စောင့်နေလဲ?
Android သတိပေး !! သတိပြုရန်သတိပြုပါကမ္ဘာကြီးကိုစစ်ဆေးသော ransomware အသစ်
ကမ္ဘာကြီးကိုစစ်ဆေးနေတဲ့ Ransomware အသစ် NotPetya ကိုသတိထားပါ။ ဒီကြောက်စရာကောင်းတဲ့လုံခြုံရေးခြိမ်းခြောက်မှုမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ဖို့သင်ပေးပါတယ်။
Samsung terminals များနှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောရွေးချယ်စရာများစွာဖြင့်လက်ဗွေရာလုပ်ဆောင်မှုကိုမဆုံးရှုံးဘဲ Android အတွက်အကောင်းဆုံးသော့ခတ်မျက်နှာပြင်။
ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သုတေသနပြုလုပ်ပြီးနောက် AV-TEST သည် Android အတွက်အကောင်းဆုံးဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဆော့ဖ်ဝဲများကိုပြသခဲ့သည်။ သူတို့ဘာတွေရှိလဲဆိုတာရှာပြီးသင်လိုချင်တဲ့အရာကို download လုပ်ပါ။
Android Alert !!: kskas.apk ကိုသတိပြုပါ
အကယ်၍ သင်သည် Play Store ပြင်ပမှအက်ပလီကေးရှင်းများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်သူများထဲမှတစ်ယောက်ဖြစ်လျှင် kskas.apk အမည်ရှိဆိုးရွားသောဆော့ဝဲလ်အသစ်ကိုသတိပြုပါ။
နာမည်ကြီး WannaCry ransomware သည် Android အတွက် WannaLocker အတွက်ဗားရှင်းရှိနိုင်ကြောင်း Avast မှပြောကြားခဲ့သည်။
Nest သည်၎င်း၏ Nest Cam IQ အတွင်းပိုင်းလုံခြုံရေးကင်မရာအသစ်ကိုလွှတ်တင်လိုက်သည်
လူများကိုအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်ခွဲခြားနိုင်သည့်စမတ်အိမ်တွင်းလုံခြုံရေးကင်မရာဖြစ်သော Nest Cam IQ ကို Nest ကုမ္ပဏီမှစတင်မိတ်ဆက်လိုက်သည်
Judy malware သည် Android ကိုဇောက်ထိုးကျစေသည်
ဂျူဒီကားမည်သူနည်း ၎င်းသည် Android ကိုဇောက်ထိုးဖြစ်စေသည့် malware သစ်သည်သန်းပေါင်းများစွာသောသုံးစွဲသူများကိုကူးစက်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
application များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများတွင် SMS ကုဒ်ကို အသုံးပြု၍ အထောက်အထားအတည်ပြုခြင်းလုပ်ငန်းကို Android O သည်အရှိန်မြှင့်တင်ပါမည်
Ransomware ဆိုတာဘာလဲ၊ သင်၏ Android ကိုမည်သို့အကျိုးသက်ရောက်နိုင်ကြောင်းနှင့်ဤအန္တရာယ်ရှိသော malware မှလုံခြုံရန်အတွက်သင်ဘာလုပ်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြပါမည်။
McAfee ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဆမ်ဆောင်း Galaxy S8 အားလုံးတွင်ကြိုတင်တပ်ဆင်ထားသည်
McAfee VirusScan သည်ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး Samsung Galaxy S8 အကွာအဝေးအားလုံး၏ထုတ်ကုန်များတွင်ပုံမှန်အားဖြင့်တပ်ဆင်လိမ့်မည်။
Netflix ၏တစ်နှစ်အခမဲ့? WhatsApp ကိုပျံ့နှံ့နေတဲ့လိမ်လည်မှုအသစ်
အမျိုးသားရဲက WhatsApp မှတဆင့်အခမဲ့ Netflix ၀ န်ဆောင်မှုကိုတစ်နှစ်ရရှိရန်ကြိုးပမ်းမှုအသစ်တစ်ခုကိုသတိပေးခဲ့သည်
Play Store မှအက်ပလီကေးရှင်း ၄၀၀ ကျော်သည်အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်သည်
Android Play Store မှအပလီကေးရှင်း ၄၀၀ ကျော်သည် malware တိုက်ခိုက်မှုများနှင့်အချက်အလက်ခိုးယူမှုများဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်
ဤလက်တွေ့ကျသင်ခန်းစာသစ်တွင်အကြံဥာဏ်ပေးခြင်းဖြင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောကူးစက်ရောဂါများ၊ ဗိုင်းရပ်စ်များသို့မဟုတ် malware များကိုရှာဖွေရာ၌သင်၏ apk ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်သင့်အားသင်သွားမည်။
ဒီနေ့ Androidsis မှာမင်းရဲ့ Android terminals မှာ backup copy လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံး applications အချို့နဲ့သင့်ကိုရွေးချယ်ပါတယ်
အမှန်တကယ်တွင်သန်းချီ။ အကြိမ်ပေါင်းများစွာဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသောစပိုင်ဝဲဖြစ်သောကြောင့် Google သည် Play Store မှ System Update app ကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီဖြစ်သည်
Android အတွက်နောက်ဆုံးထွက် updates များကိုကတိပေးသောသူလျှို app ကိုသန်းပေါင်းများစွာသောသုံးစွဲသူများကထည့်သွင်းထားသည်
သုံးစွဲသူသန်းပေါင်းများစွာသည်နောက်ဆုံးပေါ် Android update များကိုကတိပေးသည့် Play Store မှစပိုင်ဆော့ဖ်ဝဲကိုထည့်သွင်းထားကြောင်း Zscaler ကပြောကြားခဲ့သည်။
ပြီးရင်ငါးမိနစ်အတွင်းမှာ WhatsApp ချက်တင်မိတ္တူများကိုစာသားဖိုင်တစ်ခုသို့မည်သို့ကူးယူရမည်ကိုရှင်းပြခဲ့သည်
Android လက်တွေ့ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာကိုငါးမိနစ်အတွင်းတွင် WhatsApp ကိုပြင်ပတွင်အရန်ပြုလုပ်ရန်နည်းလမ်း ၃ ခုကိုကျွန်ုပ်ရှင်းပြခဲ့သည်။
ဒီနေ့ Androidsis မှာသင့်ရဲ့ Android ထုတ်ကုန်များအတွက်အကောင်းဆုံးလုံခြုံရေး application အချို့နှင့်သင်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုယူဆောင်လာသည်
နောက်ဆုံးပေါ် Nokia အစီရင်ခံစာတွင် Android ဆိပ်ကမ်းများ၌ malware ကူးစက်မှု ၄၀၀% တိုးလာသည်
Nokia သည် Threat Intelligence Report အစီရင်ခံစာသစ်ကို Android တွင် malware ကူးစက်မှုသိသိသာသာတိုးပွားလာကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
Google Photos သည်ဆက်သွယ်မှုအားနည်းသောအခြေအနေများတွင်အရန်များကိုအရှိန်မြှင့်တင်ပေးသည်
ယူအက်စ်တွင်၎င်း၏အခမဲ့စမတ်ဖုန်းများအတွက်လစဉ်လုံခြုံရေး update များကို Samsung ဆမ်ဆောင်းမှပေးမည်
၁၈ လကြာကတိတော်များအပြီးတွင် Samsung သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိသော့ဖွင့်ထားသောစမတ်ဖုန်းများအတွက်လစဉ်လုံခြုံရေး update များကိုနောက်ဆုံးတွင်ထုတ်ပြန်လိမ့်မည်
လာမည့်ဆောင်း ဦး တွင်ဖြန့်ချိမည့် smart home security ထုတ်ကုန်များစာရင်းကို Nest မှပြင်ဆင်လျက်ရှိသည်
Android app တစ်ရာကျော်ကျော်တွင် Windows malware ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်
လုံခြုံရေးကုမ္ပဏီ Palo Alto Networks မှအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရှိ developer များကဖန်တီးခဲ့သည့် Android အက်ပလီကေးရှင်း ၁၃၂ ခုကိုကူးစက်စေသော malware ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်